U-Anja Schaap ufumene efile elwandle ngeenqwelo zaseJamani? Ngaba oko kunokwenzeka ngokwemithetho yemvelo? : UMartin Vrijland
Ngokwamaphephandaba ambalwa (ANP nguJohn de Mol, umvelisi weTV) u-Anja Schaap (33) izolo nge-13: 30 (kwakhona i-33 phakathi) iyure fu maneka elwandle. Kwimimiselo yam yangaphambili ndacacisa ukuba u-Anja Schaap ulahleka mhlawumbi ngu-PsyOp (ukusebenza kwengqondo).
Ngenxa yokulungelelanisa sicinga ukuba u-Anja Schaap wangena elwandle, emva kokuba wayenomcimbi kunye nosapho kwi-pub (kodwa kwiOpsporing Verzocht ngokukhawuleza kwakukho ilungu lentsapho) kwaye liyabonakala "kuzo zonke iintlobo zeekhamera zokhuseleko" (ukuveliswa kukaJohn de Mol?) (kude kube sebusuku), ngoko umbuzo ngowokuqala nokuba yonke into eyenziwa ngumzimba uyaphuma emanxweme okanye iqhutywe yile yangoku? Malunga nelo xesha ku (ngokutsho kwiwebhusayithi katwijk.info) Ebb e Katwijk aan Zee, ngoko unokucinga ukuba bakhethe ixesha elifanelekileyo (ukuba yi-PsyOp) okanye ukuba "i-Anja" kungenzeka ukuba iqhutywe (okanye yalahla elwandle).
Umbuzo wesibini kukuba kuthatha ixesha elide ukuba umzimba udibanise kwaye xa uza kuphinda uphinde ujikeleze. Kutheni lo mbuzo uchaphazelekayo? Ewe, u-Anja Schaap ulahlekile ukususela ngoLwesibili i-28 Meyi 2019. Yiyo yeeveki ze-3 kunye neentsuku ze-2 ezilahlekileyo ukufumana. I-North Sea ayikwazi ukuthathwa njengendawo yamanzi ashushu. Njengoko u-Anja Schaap akakwazi ukubizwa ngokuba yi-bold kwividiyo ye-Opsporing Verzocht, uya kuguqa ngokukhawuleza (ukuba akabuyanga elwandle). Umzimba ofileyo ufika phezulu emva kweeveki ezimbalwa ngenxa yokuvuvukala kunye negesi ekwakheni inkqubo yokubola yomzimba (bona apha okanye iGoogle ngisho). Ukunikezelwa komzimba oqhekekileyo ka-Anja, le nkqubo kufuneka ukuba ithathe iiveki ngaphambi kokuba ifike phezulu. Ubunjani ukuba umzimba wakhe sele usujikeleze phezulu (ucinga ukuba ibali liyinyaniso)? Ku no kwenzeka. Kodwa akunakwenzeka ukuba kufuneka abuyele emhlabathini?
Liliphi ithuba lokuba umkhombe waseJamani (uhlobo luni lwe-ship?) Uza kumbona elwandle elwandle? Andiyiyo ingcali enokwenzeka, kodwa kunikezelwa konke okutshintshileyo nokutshintshiweyo kwimidiya, ukutshintshwa kweSherlock Holmes 'kunye kunye nenyaniso yokuba yonke iphepha le-Facebook likaAnja Schaap (kuquka idilesi yakhe yasekhaya) yayikuphathelele uSherlock Holmes , mhlawumbi siyakuzibuza ukuba akuyiyo i-PsyOp ngenjongo yokuxhoxisa i-app ye-Sherlock Holmes (i-data enkulu ye-spyware app)? Funda ngaphakathi eli nqaku inkcazo ecacileyo.
Uludwe lwekhonkco lovimba: ad.nl, katwijk.info, quora.com
tags: Anja, ukufa, IsiJamani, eziziimbalasane, fu maneka, in, Katwijk, psyop, Iigusha, nqanawa, Zee
20 Juni 2019 kwi-00: 36
Ngaba kucacile ukuba uphando lubonelela ngeenkqubo ezizenzekelayo.
U-Anja uhamba nge sitrato kwaye awuboni nantoni.
U-Anja uhamba ngaphakathi kweBlauwen Bock kwaye ukukhanya kuphazamisayo.
Kwaye kutheni i-movie ye-Opsporing Verzocht ingaxhunyekanga kwiiyure?
Ixesha u-Anja engena kwiCarfus Cafe aluhambisani! ngewashi le-jeweler eduze kwevenkile ehlala ihamba ngexesha.
Isithunzi osibona kwinkqubo yokuFumana i-Detection ingaba nayo i-Maxima, ngokucacileyo kwaye kamva kule nkqubo bayayivuma
I-100% inkohliso, ndiphinde ndithi akukho nto iyenzekayo, ixesha lokuba izinto ezifana nale
fumana isigwebo sikawonkewonke
i-nml, Ulwazi olubuxoki malunga nemiba echaphazelekayo kunye nokukhohliswa kwabemi be-17.000.000
ludcor wabhala wathi:
20 Juni 2019 kwi-06: 50
Ukuba umntu ubona imifanekiso ke akulungile. I-1) ikhamera yokulinda ngaphandle ngaphandle kwe-nr1 2) xa u-Anja ungaphakathi kwekhamera yokujonga i-2 kunye ne-3) ikhamera yokujonga i-3 ejoliswe kulabo bantu be-2 kwibha.
Ngokombono wam nr 1 yinyani kwaye i-2 kunye ne-3 zirekhoda ngokwemiqulu kwaye ayinanto enokuyenza. kunye ne-Bakerstreet ngokwe-Facebook ka-Anja ayikho (google "imephu Katwijk").
Masithi akukho 3 eya kuba yinyaniso ngoko umbuzo "yiyiphi injongo yokukhokela ikhamera kula bantu be-2?". Ngokombono wam, akukho sizathu, kuba ngelo xesha akukho mbuzo wokulahleka ngaphandle kokuba ......
Ngaloo 3 ayikwazi ukunyaniseka. Ukudibanisa nr 1 kunye nr 2 ayinakwenzeka. Yonke into iyahamba ngokwemiqulu ebhalwe ngaphambili. Ukuba umntu uthelekisa le imifanekiso yekhamera yeBelgium ekhoyo e-Australia (ekugqibeleni ibonwe kwivenkile) ngoko leyo i-Anja icacile njengoko uMartin uthe i-psyop.
20 Juni 2019 kwi-09: 27
Eyona ... loo mifanekiso yekhamera yadutshulwa kakuhle.
Isikhwama kufuneka sihlolwe ixesha kunye nangoko kuba u-Anja uye waphonsa isikhwama sakhe kude (ukuze umnxeba wakhe angashiyi i gauge) ngokubhekiselele kumgca webali. Ngoko ke ibhegi kufuneka ibe mfanekiso ... ngokuphindaphindiweyo
Ngubani oya ekhaya phakathi kobusuku ehamba? Iphi na iqela leentsapho laphuma ngokukhawuleza? Ibali ngoku ngokukhawuleza liye laguqulelwa kuphela ilungu lelungu le-1 (owayehlala naye kwibhar).
Ibali elihle kwaye nje ngoSiebe Viegers kukho isidumbu .. psyop ekupheleni. Iya kulandelayo. Khangela kunye! Kuba mnandi ngaphezu kwePokemon Go!
20 Juni 2019 kwi-07: 23
Kuthiwa umkhombe waseJamani. Liliphi igama lelo nqanawa? Inani lekhephe?
Ndicinga ukuba kukho iiwebhusayithi okanye ii-apps ongazisebenzisayo ukufumanisa indlela yokukhupha. Ngubani oya kuluhlupha oku? Ngaba umzimba uthatyathwe kwinqanawa yaseJamani ngeenqanawa zaseDutch okanye inqwelo yaseJamani imlethe ngaselwandle? Ndiyakholwa ukuba iinqanawa eziza eNetherlands zibhaliswe. Ingaba uhlala kwindawo yokuhlala? Ngubani owaziyo ngaloo nto?
20 Juni 2019 kwi-10: 29
Ngaba sifuna ukuyenza ubuqili
Khangela kwimbali, ude kangakanani na unxweme?
Akukho nqanawa imile ngeli xesha. Phantse bonke bawenza malunga neenombolo ze-9, kunjalo?
kwaye uqaphele oku okulandelayo,
Zonke izinto zazisesikhwameni sakhe, zambiza, "Zonke" izinto zakhe
Ngeveki yesibini iqhubile kwaye imvula kakhulu, umoya kufuneka uhlambe umzimba emanzini.
Siye sabona ngokukhawuleza okuhamba kunye nezikhonkwane ezihlanjwe kwiinqanawa zonyaka.
Bayazi njani ngokukhawuleza ukuba nguAnja, umzimba kufuneka ube kwindawo ekude yokutshatyalaliswa emva kweeveki ezintathu, ngoko lixhoba, kungakhathaliseki ukuba i-makaber izandi
Kutheni kungekho nto iphambili yokukhangela imizila enokwenzeka eyenziwe ngumgcini wonxweme?
kutheni singenayo imifanekiso yomlindi wonxweme eya kwisikhephe saseJamani?
kutheni ukuba umphathi ongeyiphumeleli wesitye angakhankanyi?
I-1000 ikhangele abantu kunye nomphathi angayifumana nje umzimba elwandle?
Ngasentla kweziqithi zaseWadden, ha ke ngoko akunakwenzeka ukuba uphuthuke kude kube elwandle ngokubhekiselele kumaphethana enxweme!
Ewe kwi-fabeltjeskrant yonke into eyenzekayo, khangela i-map yangoku-maphupha enxweme yaseHolland, i-current runs every six hours
Ngoko ke umzimba kufuneka uphonswe elwandle kude kunokuba umgama weThe Texel / Den-Helder, kuba kungenjalo kwakuza kuhlamba elwandle kummandla wonxweme.
Yonke into inokwenzeka, kodwa ayimangalisa
I-Katwijkers nayo iyazi kakuhle
Kutheni kungenjalo inqanawa yonxweme okanye i-heli, kutheni kungabikho ifilimu, intlanzi ebolile ayivumi kakhulu njengalolu hlobo
« U-Anja Schaap unokubona imifanekiso kwi 'Uphando luceliwe' kwaye ngoko akukho PsyOp?
U-Anja Schaap ufumene efile elwandle ngaphezu kweeWadden Islands, kodwa yiyiphi iinqanawa (myshiptracking.com)? »
Iindwendwe ezipheleleyo: 163.212